60 naqshad qaabeeyeyaal ah oo kugu dhiirrigeliya | Abuurista khadka tooska ah
Waxaan u maleynayaa inaynaan waligeen qeexin ama aan isku dayin inaan ka fahamno qeexitaankiisa, markaa halkan ayaan u soconaa
Ereyga 'minimalist', marka loo eego guud ahaan baaxadiisa, waxaa loola jeedaa wax kasta oo loo dhimey nuxurkaisaga, laga xayuubiyey cunsurradii hadhay. Waa tarjumaad tarjumid ah oo Ingiriisi minimalist ah, oo macnaheedu yahay minimalist, taas oo ah, waxay isticmaashaa ugu yar (ugu yar Ingiriisiga). Waa u janjeera in la yareeyo waxyaabaha lagama maarmaanka ah. Waxay sidoo kale khuseysaa kooxaha ama shakhsiyaadka ku dhaqma astaamaha iyo kuwa yareeya alaabtooda jir ahaaneed waxayna u baahan yihiin ugu yaraan, sidoo kale waa macnaha in wax walba la fududeeyo ugu yaraan. Macnahan ayaa sii caddeynaya haddii loo sharaxo in minimalism dhab ahaan macnaheedu yahay yarayn. Ereyga "uguyar" waxaa markii ugu horaysay adeegsaday falsafada ingiriiska ah Richard Wollheim sanadkii 1965, si uu ula jeedo sawirada Ad Reinhardt iyo walxaha kale ee ay ka koobantahay garaadka maskaxdu aad u sareyso laakiin leh qaab hoose ama wax soo saar hooseeya, sida kuwa waalan ee Marcel Duchamp.
Aad ayey muhiim ugu tahay xaddidaadaha aan la filaynin xukunka koowaad, midka aan kaga tagay geesinimo. Minimalism waa lama huraan, waxa lagama maarmaanka u ah websaydhkuna waa in farriintu gaadho qofka gala, wax kasta oo kale ayaa la bixin karaa.
Ka boodka ka dib waxaa jira 60 bog oo dabacsan, minimalism qaabkeeda ugu nadiifsan, qurux, fudeyd, farshaxan.
4 Iskaashatada Kaarboon-ka
5 Joornaalka Geeddi-socodka
9 Ku dadaal
11 alan kariye
14 anaga (istuudiyaha naqshadeynta)
15 Gecko koronto
16 aqoonyahanka cilmiga bulshada.net
17 Ryan dardaaran
18 Wanaagsan Inc.
19 Mudane Toledano
20 naqshadeynta midtone
21 ugaadhsiga istuudiyaha
23 Halka Ay Joogaan
25 qabooji hage
31 amillion waxyaalood in la sameeyo
36 Sheekooyin & Riwaayadaha
37 Johny jecel yahay
39 H waxaa qoray Harris
44 Qalbi ahaan
46 Masood Kamandi
48 Xeerka Naqshadeynta
50 Saddex iyo toban.
51 Tima jaraha Oscar
52 Cimilo kulul
58 naqshada ben hulse
59 farsamada pixel
60 Daffinson roobka
anaga (istuudiyaha naqshadeynta)
aqoonyahanka cilmiga bulshada.net
amillion waxyaalood in la sameeyo
Sheekooyin & Riwaayadaha
Johny jecel yahay
H waxaa qoray Harris
Saddex iyo toban.
Tima jaraha Oscar
naqshada ben hulse
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » 60 naqshad qaabeeyeyaal ah oo kugu dhiirrigeliya